Semisolid သေကာစ် China Manufacturers & Suppliers & Factory
Semisolid သေကာစ် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Semisolid သေကာစ် ထုတ်ကုန်များ)
ပလပ်စတစ်မှိုဆေးထိုးကားတစ်စီး tools များ
ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသီးအနှံအစိတ်အပိုင်းများမှအသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျထပ်ခါထပ်ခါအတူတူပင်ကို item ထုတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် injection တန်ဆာကြီးလှ၏။ ဒါရေပန်းစားသည်အဘယ်ကြောင့်နှစ်ဦးကိုအဓိကအကြောင်းရင်းများရှိနေပါသည်: ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးမှိုအတွက်ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြီးနောက်,...
လူမီနီယမ်အလွိုင်းအပိုင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Hook Tools များ Casting Die
လူမီနီယမ်အလွိုင်းနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်နှင့်အတူ Casting Die စက်မှုဇုန်, စီးပွားဖြစ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, ပါးစပ်တွင်း, သေနတ်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးတွင်အသုံးပြုနေကြတယ်, အာကာသ, ဒါကြောင့်အပေါ်မော်တော်ယာဉ် applications များနှင့်။ အလူမီနီ၏အစွမ်းသတ္တိကိုချေးခုခံနှင့်အပူလွန်ကျူးဂုဏ်သတ္တိများသည်...
Diecast လူမီနီယမ်အလွိုင်းကာစ်လုပ်ငန်းစဉ်ကွင်းဆင်း Terminator
မှိုလူမီနီယမ်အလွိုင်းကာစ် Casting သတ္တုအဓိကအားဖြင့်အီလက်ထရွန်းနစ်, မော်တော်ကား, မော်တာ, အိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့်အသုံးပြုကြသည် အချို့ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအချို့က high-performance ကို, High-တိ, အရည်အသွေးမြင့်လူမီနီယံအလွိုင်းထုတ်ကုန်လည်းအသုံးပြုကြသည် ကြီးမားတဲ့လေယာဉ်,...
လူမီနီယံအလွိုင်းအခြေခံပညာအမြဲတမ်းမှိုကာစ်၏အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာသူတို့ကအရမ်းပေါ့ပါးဖြစ်ကြပြီးအမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုကိုဆီးတားနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ အားလုံးသေဆုံး-casting သတ္တုစပ်၏အပူချိန်။ ရှုပ်ထွေးသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်ပါးလွှာ-တံတိုင်းကာရံထားသော application များအဘို့, လူမီနီယမ်စတဲ့အလွန်မြင့်မားရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုရှိပါတယ်။...
ဖိအားလူမီနီယမ်အလွိုင်းဟော့ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
လူမီနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting အလေးချိန်ရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်မော်တော်ယာဉ်လောင်စာထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ လူမီနီယံအလွိုင်းသေ-casting အစိတ်အပိုင်းများသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ ထိုကဲ့သို့သောပါဝါ tools များနှင့်အခြားခရီးဆောင်ကိရိယာများအဖြစ်လက်-ကျင်းပ application များအတွက်ကစံပြစေသည်။...
လူမီနီယမ်အလွိုင်းကာစ်မှိုအင်ဂျင်နီယာ Casting Die
သောကြောင့်ယင်း၏ချေးခုခံခြင်းနှင့်ကောင်းသောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ၏, လူမီနီယမ်အလွိုင်းကာစ်တင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလည်းမရွေးထားပြီး, ဒါကြောင့်ရေကြောင်းပလီကေးရှင်း applications များ၏ကျယ်ပြန့မှစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ် shell ကိုကနေအဓိကရွေးချယ်မှုအောင်။ လူမီနီယမ်အလွိုင်း ဒါဟာကွန်ယက်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုအောင်, Cast...
လူမီနီယမ်အေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း Diecasting စက်အစိတ်အပိုင်းများ
Aluminum`s သတ္တုသေသွန်းခွန်အားကိုချေးခုခံနှင့်အပူဂုဏ်သတ္တိများပျောက်ကွယ်သွားစက်မှုဒီဇိုင်နာများသိသိသာသာအားသာချက်များကိုဆက်ကပ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်ထူးအိမ်သင်အမှတ်တရလူမီနီယမ်နည်းပညာ ပို. ပင် application များအတွက်တစ်ဦး option ကို ချ. လူမီနီယံသေဆုံးစေတော်မူပြီ။ Ruizhun Precision သတ္တု Co. , Ltd မှ (RZ)...
အလူမီနီကာစ်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများမော်တော် Casting Die
လူမီနီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းရှုပ်ထွေးသော, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံ, ပါးလွှာ-တံတိုင်းကာရံထားသောနက်ရှိုင်းသောလိုင်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွန်းသောသတ္တုသောကြောင့်...
လူမီနီယမ်အလွိုင်းစက်မှုထုတ်ကုန်များ, လူမီနီယမ်အလွိုင်းအလင်းနှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်နေဆဲ, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများသိသာတဲ့တိုးတက်နေကြသည်။ လူမီနီယမ်အလွိုင်းစက်ရန်လွယ်ကူသည်နှင့်မြင့်မားသောအပူလွန်ကျူးရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, ယာဉ်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်...
အေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များကို Casting Die
လူမီနီယမ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုလျင်မြန်စွာအချိန်တိုတို, သတ္တုအရည် solidification ဖြည့်, မြင့်မားသောကြောင့်မြန်နှုန်းအဆာအမျိုးအစား, မြင့်မားသည်, သေဆုံး-casting စစ်ဆင်ရေးသံသရာမြန်နှုန်း။...
အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting အမြဲတမ်းမှိုလူမီနီယမ်
အဆိုပါသတ္တုများပုံသွန်းဖြစ်စဉ်ကိုလူမီနီယံအလွိုင်းအဆိုပါသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးအသုံးအလွိုင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်နေဆဲအရှိဆုံးချွေပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ္တုများပုံသွန်းစီမံကိန်းများအတွက်။ လူသန်းပေါင်းများစွာသေဆုံး-casting...
စိတ်ကြိုက်လူမီနီယမ်အလွိုင်းအော်တိုအပိုင်းများအတွက် Casting Die
လူမီနီယမ် ချ. အစိတ်အပိုင်းများသေဆုံးလည်းသူတို့ရဲ့ချေးခုခံသူတို့ကိုအဓိကရွေးချယ်မှုအောင်ကောင်းသောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများဘို့ရွေးကောက်နေကြတယ် အဏ္ဏဝါ applications များမှစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်အိမ်ရာကနေပလီကေးရှင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်သည်။ လူမီနီယမ်သေဆုံးသွန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်းအပူမွငျ့မားရှိပါတယ် နှင့်လျှပ်စစ်စီးကူးအဖြစ် EMI...
Semisolid သတ္တုကာစ် Die
High Quality Precision သေကာစ်
မဂ္ဂနီစီယမ်၏ Semisolid သေကာစ်